Dhammaan wixii ku saabsan Daabac & Ciyaar, Daabac iyo Ciyaar - Ikkaro
Qaybta loo qoondeeyay Daabacaad & Ciyaar. Labadaba si loo ogeysiiyo cayaaraha iyo farsamooyinka dhismaha ciyaarta DIY.
Daabac & Ciyaar, Daabac oo Ciyaar. Waa nooc ka mid ah "fudud" ciyaarta oo aad kaliya la ciyaari karto madbacad, tan iyo markii loogu talagalay in lagu daabaco oo lagu ciyaaro warqad.
Helitaan aad u dhakhso badan, laakiin taasi waxay ka koobnaan kartaa xeerar adag iyo makaanik. Waa inaadan ku wareerin fudeydka soo-saaristeeda.
Qaab dhismeed leh hay'ad u gaar ah oo laga yaabo inaan si fiican loo aqoon, laakiin haddii aad fursad siiso waxaa hubaal ah inay ku siinayso daqiiqado aad u fiican iyo daqiiqado badan oo raaxo leh.